Broccoli Cauliflower Salad - Ezi Ntụziaka
kukumba tomato dil dil utoojoo ude salad
esi esi nri portobello ero ke pan
nduku salad na dil Pịkụl ihe ọ juiceụ juiceụ
dum ọkụkọ na ikuku fryer
Broccoli Cauliflower Salad bụ ihe mara mma, ekpomeekpo jupụtara na uzommebe salad nke zuru oke maka oge ọkọchị. Ọ dị mfe, n’ụzọ dị oke mma, ma na-atọ ụtọ!
taco itinye na ude chiiz na anụ
Jiri ya je ozi Ndị ohi , butere ara okuko ma ọ bụ anụ ezi anụ ezi . Broccoli kọlịflawa salad nwere nutty, na-enye ume ọhụrụ ụtọ na onye ọ bụla ga-ahụ n'anya!
Broccoli Cauliflower Salad Efrata
Ọ dị mfe ịchọta ihe eji esi nri broccoli kọlịflawa salad afọ niile. M hụrụ n'anya a na-atọ ụtọ mmanụ a mustụ mọstad mgbakwasa maka a uzommeputa. Nke a bụ ndepụta ụlọ ahịa gị:
Broccoli & kọlịflawa: M na-ahapụ ndị a ndu iji nye ezigbo crunch crunch. Nwere ike ịkụ ha ma ọ bụrụ na ịchọrọ.
Cheta na raw kọlịflawa bụ extra crunchy n'ihi ya gbalịa ibelata iberibe pụtara obere otú ọ dị mfe iri. (Enwere ihe ọ bụla dị njọ karịa ịnwa igbochi ọnụ gị nke nnukwu akwụkwọ nri mgbe ị na-akparịta ụka?!)
Olive oil & Mayonezi mepụta creamy base
Mmanụ aeyụ na-agbakwunye ihe ụtọ ma na-agbapụta uwe ahụ.
Dijon mọstad na-agbakwunye tang, m na-ahọrọ a grainy dijon (nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ahịa ọ bụla ga-enwe). Ọ bụrụ na ị na-eji mmanụ a honeyụ dijon, ị nwere ike ịbelata mmanụ a honeyụ na akwa.
Mkpụrụ almọnd na-amị amịcha kacha mma ma ọ bụrụ na toasted. Debe ha na pan na-abaghị uru na-akpali akpali na ọkara-obere ọkụ maka ihe dị ka nkeji 5-7 ma ọ bụ ruo mgbe ọ na-esi isi.
Anụ ezi, m kwesịrị ikwu ihe ọzọ? Na-agbakwunye nnu, anwụrụ, ụtọ ekpomeekpo! Chekwaa obere ihe maka icho mma!
Nwere ike ịhapụ anụ ezi ahụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ, ma ọ bụ dochie walnuts ma ọ bụ pecans maka almọnd slivered, nke ọ bụla bụ ihe ịtụnanya na mgbakwunye na broccoli na kọlịflawa salad.
Etu esi eme Broccoli Cauliflower Salad
Maka ihe ka ukwuu n'ụdị ịkpụcha na ịkpụcha ihe na-etinye aka na ịme broccoli na salad kọlịflawa. N'adịghị ka nke anyị Kọlịflawa Salad Ntụziaka , efere a anaghị achọ isi nri kọlịflawa. Nke a bụ usoro ahụ:
Ighe anụ ezi anụ ahụ, kpochapụ, ma daa. (Ọ bụrụ n'ịchọrọ, ị nwere ike iji anụ ezi anụ ezi mana ị ga-esi nri anụ ezi gị kacha mma)
Agbaji na iri broccoli na kọlịflawa n'ime iberibe ọnya. Wepu peels kacha sie ike na broccoli stem ma jiri ime dị nro kwa.
Na ala nke efere salad, ma ọ bụ na efere dị iche, jikọta ihe niile eji ejiji.
Gbakwunye ihe eji eme salad ma kpoo ya.
Maka nsonaazụ kacha mma, ana m akwado ka ị tụfuo akwa ahụ ma hapụ ka ịnọdụ ala tupu ị jee ozi. Ọ ga - enyere ụtọ ndị ahụ aka ịgwakọta na ihe ndị ọzọ iji gwakọta, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị buru ụzọ mee ya.
Ogologo oge ole ka Broccoli Cauliflower Salad Na-adịgide?
Broccoli na kọlịflawa anụ ezi salad ga-ejide na friji maka ụbọchị 3-4 na efere kpuchie ma ọ bụ akpa. Ọ bụ nnukwu nri dị n'akụkụ iji mee n'ọdịnihu. Ọbụna ejiji mgbe ọ na-eyi uwe, broccoli na salad kọlịflawa anaghị enweta soggy. N'ezie, inwere ike ịchọpụta na ekpomeekpo ga-etolite karịa.
ụtọ na utoojoo dipping ihendori ịzụta
Nri di otutu kari
Ntụziaka Salad Kacha Mma (Mfe) - ga n'ihu!
Frito ọka Salad - potluck mmasị
Kukumba Yabasị Salad - ọhụrụ na ekpomeekpo!
Pottọ Nduku Salad - Yi ma na-atọ ụtọ!
Creamy Kukumba Salad - kpochapụwo potluck salad!
Pasta nke Italy - The zuru okè potluck akụkụ nri!
Oge Nkwadebeiri na ise Nkeji Oge zuru ezuiri na ise Nkeji Ọrụ8 servings Onye edemedeHolly Nilsson Broccoli kọlịflawa salad bụ ihe ịchọ mma, na-esi ísì ụtọ nke salad zuru oke maka oge ọkọchị. Ọ dị mfe, n’ụzọ dị oke mma, ma na-atọ ụtọ! Bipute Ntụtụ
▢4 iko brọkọlị gbanwere
▢4 iko kọlịflawa gbanwere
▢¼ iko uhie yabasị okpokoro
▢6 Mpekere anụ ezi esie ya ma dakwasị ya
▢½ iko almọnd slivered
▢3 tablespoons mọstad
▢3 tablespoons mmanụ a honeyụ
▢¼ ngaji ntụ ntụ ma ọ bụ otu galiki, gweriri
▢nnu na ose
Saa broccoli na kọlịflawa florets na bee n'ime aru sized iberibe.
Debe ihe oriri niile na obere efere na whisk ka ijikọta.
Tinye ihe oriri niile na nnukwu efere ma tinye ya na mgbakwasa.
Calorisị:Ogbe 233,Carbohydrates:14g,Protein:6g,Abụba:17g,Abụba Ajuju:3g,Cholesterol:13mg,Sodium:Ogbe 237mg,Potassium:394mg,Eriri:3g,Sugar:8g,Vitamin A:Ogbe 285IU,Vitamin C:67.2mg,Calcium:53mg,Iron:1mg
Isiokwubroccoli kọlịflawa salad N'ezieAgụụ, Salad Esie yaOnye AmericaEnd SpendWithPennies.com. Ọdịnaya na foto bụ ihe nwebisiinka. Ringkekọrịta nke uzommeputa a gbara ume ma nwee ekele. A machibidoro ibipụta na / ma ọ bụ ịzigharị usoro nri zuru oke na mgbasa ozi ọhaneze. Biko lee iwu ojiji iji foto m ebe a .